အနံ့ေ ပျာက်တာ နဲ့ ကိုဗစ် ဖြစ် နေ ပြီ လား? အနံ့ပြန် ရတာက ကိုဗစ် ပျောက် သွားတာလား? – The News Post
အနံ့ေ ပျာက်တာ နဲ့ ကိုဗစ် ဖြစ် နေ ပြီ လား? အနံ့ပြန် ရတာက ကိုဗစ် ပျောက် သွားတာလား?
October 25, 2020 By thu han soe Knowledge
ကိုဗစ်ကြောင့် အနံ့ပျောက်ခြင်းသည် နှာခေါင်းပိ တ်ခြင်းကြောင့် အနံ့မရှူနိုင်ခြင်း မဟုတ်ပါ၊ အနံ့ခံသော အာရုံခံစနစ်၏ ပြသနာတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ကိုဗစ်တွင် နှာခေါင်းပိတ်ခြင်း နှာဆေးခြင်းသည် အဖြစ်နည်းပါသည်။ ကိုဗစ်ကြောင့် အနံ့မရပါက လုံးဝအနံ့မရခြင်းဖြစ်နိုင်သလို အနံ့ခပ်ပျော့ပျော့များကိုသာ မရတော့ခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ လေ့လာမှုများအရ မိန်းကလေးများတွင် အနံပျောက်ခြင်း ပိုဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ အနံ့ခံမရခြင်းအပြင် အရသာခံ မရခြင်းပါ တွဲဖက်ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါသည်။
ကိုဗစ်ရောဂါကြောင့် အနံမရခြင်းသည် အများအားဖြင့် မည်သည့်ကနဦးလက္ခဏာမျှမပြဘဲ ရုတ်တရ က်ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါသည်။ တချို့တွင် ချောင်းခြောက်စတင်ဆိုးပြီးမှ အနံ့ပျောက်သွားတတ်ပါသည်။ အနံ့ပျောက်ခြင်းသည် ကနဦးရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုအဖြစ် လာတတ်သကဲ့သို့ ဖျားနာနေသူများတွ င်လည်း စဖျားပြီး ၄-၅ ရက်အတွင်း အနံ့ပျောက်သွားတတ်ပါသည်။
အနံ့ပျောက်မပျောက်စမ်းသပ်တဲ့အခါ နေ့စဉ်သုံးနေကျ ပစ္စည်းများဖြင့် မိမိကိုယ်ကို စမ်းကြည့်၍ရပါသည်။ နိုင်ငံခြားတွင် peanut butter, wasabi, coffee, vanilla extract စသည့်ပစ္စည်းများဖြင့် စမ်းသပ်ခိုင်းပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် သနပ်ခါး၊ သံပရာသီး၊ ပင်စိမ်း၊ စံပယ်ပန်း၊ ကော်ဖီမူန့် အစရှိသော လူကိုအန္တရာယ်မပေးနိုင်တဲ့ လွယ်လင့်တကူရနိုင်သော နေ့စဉ်သုံးပစ္စည်းများဖြင့်စမ်းသပ်ရှူကြည့်နိုင်ပါသည်။ ပစ္စည်းနှင့်အနံ့အမျိုးအစားသည် အဓိကမဟုတ်ပါ၊ အနံ့ရမရကိုသာ အဓိကထားပြီး စမ်းသပ်ကြည့်ရပါမည်။ အကယ်၍ စိတ်မချပါက လူနှစ်ယောက်နိူင်းယှဉ်စမ်းသည့်အခါ ပိုးကူးစက်မူနည်းစေရန် ပစ္စည်းများ ရောမသုံးမိစေရန်လည်း သတိ ထားပေးပါ။
အနံ့ပျောက်ပြီး ၃-၄ ရက်ခန့်အကြာ အနံပြန်ရလာခြင်းသည် ရောဂါအရှင်းပျောက်သွားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ရောဂါလက္ခဏာတခု မရှိတော့ခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ ရောဂါလက္ခဏာမပြခင် ၂ ရက်မှစတင်ကာ ပြသအပြီး ၁၀ ရက်အတွင်း ကိုဗစ်ပိုးများပွါးလာပြီး အပြင်ကိုထွက်လာပါသည်။ ထို့ကြောင့် အနံ့ပြန်ရသည့်တိုင် ပိုးများဆက်ထုတ်နေနိုင်ပါသည်။ ကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်နေသူအပါအဝင်၊ ရောဂါလက္ခဏာမပြခင် ၂ ရက်က ထိတွေ့ခဲ့သူ အတူနေမိသားစုဝင် အားလုံး ၁၄ ရက် သီးသ န့်နေပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
အနံ့ပျောက်ပါက ကိုဗစ်ပိုးစစ်ဆေးရန် တခုထဲမဟုတ်ဘဲ၊ အခြားရောဂါများရှိမရှိ အဆုတ်ကောင်းမကောင်း အောက်ဆီဂျင်ပုံမှန်ရှိမရှိ ဆေးကုသဖို့လိုမလို စသည်တို့ကို ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပြသကြည့်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
အနံ့ပျောက်ခြင်းသည် ယာယီသာဖြစ်ပေါ်တတ်ပြီး၊ ကုသမှုမပေးလျှင်လည်း ပြန်ကောင်းလာတတ်ပါသည်။ ဆေးမြီးတိုများကြောင့် ပျောက်ကင်းသွားသလို ထင်တတ်ကြပါသည်၊ သတိထားပြီး သုံးစွဲကြပါ။ အများစုမှာ ၁ ပတ်ကျော်လျှင် ပြန်ကောင်းလာတတ်ပါသည်။ တချို့တွင် ချက်ချ င်းမပျောက်ပါ၊ ၄ ပတ်ကျော်အထိ အများဆုံးကြာနိုင်ပါတယ်။
ကိုဗစ်အပြင် အခြားဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများ နှာခေါင်းအတွင်းပိုင်းယောင်ယမ်းခြင်း နှာခေါင်းတွင်းအသားပိုထွက်ခြင်း ဓာတ်မတည့်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်ပါက အနံ့ပျောက်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း အခြားဗိုင်းရပ်စ်များထက် ကိုဗစ်မှာ ပိုအဖြစ်များသည်ကို တွေ့ရှိ ရပါသည်။
အနံ့ပျောက်ခြင်းသည် ကိုဗစ်ပိုးရှိသူ လူတိုင်းတွင် မဖြစ်ပေါ်ပါ။ အနံ့မပျောက် အရသာမပျက်ပဲ ဖျားခြင်း ချောင်းဆိုးခြင်း အစရှိသည့် အခြား လက္ခဏာများနှင့် ပြလာလျှင်လည်း ကိုဗစ်ဖြစ်နိုင်ပါသေးသည်။
MED INFO MYANMAR
ဘယ်သူ့ ဆီမှာမှ မရှိနို င်တဲ့ ထက်ထက် မိုးဦးရဲ့ ပညာ တစ်ခုကို ထုတ်ေ ဖ်ာပြောပြ လိုက် သော မိတ်က ပ်ညီညီမောင်(စမ်းေ ချာင်း)
မြွေနဲ့ ပတ်သက် ပြီး ရွှေမြန်မာတွေ ယုံကြည်ေ နကြတဲ့ အလွဲ တချို့ (ရှေးလူ ကြီးတွေ ဂျင်းထည့် ခဲ့ပုံများ)